Misheck Sibanda, chief cabinet secretary.
Munyori wedare remakurukota, Dr Misheck Sibanda, pamwe nemutevedzeri wavo, Dr Ray Ndhukula, varamba neChishanu kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemamhando dzemoto kuti vape humbowo maererano nekuti muzvina bhizimisi, VaWicknell Chivhayo, vakapihwa sei tenda yekuvaka gwenya remagetsi ezuva reGwanda National Solar Project.
VaChivhayo vakaudza komiti iyi kuti mushure mekunyimwa tenda yegwenya remagetsi iri pakutanga vakanyorera kuvaviri ava negurukota rinoona nezvemanhando dzemoto pamwe neState Procurement Board izvo zvakazoita kuti vapihwe basa rekuvaka gwenya iyi.
Mutsamba yavanyorera kuparamende Dr Ndhlukula varamba kuti vakasangana kana kuona tsamba yakabva kuna VaChivhayo uye vati bazi rezvemhando dzemoto ndiro rinofanira kubvunzurudzwa panyaya iyi.
Vati havaoni chikonzero chekuti vamire pamberi pekomiti iyi vachiti basa ravo ivo nderekuongorora kuti mapazi ehurumende aita basa rawo nemazvo here.
Asi sachagiro vekomiti iyi, VaTemba Mliswa, vati tsamba yaDr Ndhlukula haina basa uye vaviri ava vanofanira kuuya kuzozvichenura pamberi pekomiti yavo.
Vati vacharonga zvakare rimwe zuva rekuti vaviri ava vauye kuzopa humbowo.
VaMliswa vati komiti yavo yatambira chikumbiro chevaimbove gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma, chekuti vazozvichenura mushure mekunge vadomwawo panyaya yaVaChivhayo.
VaMliswa vati komiti yavo yaita chisungo chekukoka vese vaive makurukota ezvemhando dzemoto nevanyori vebazi iri kubvira pakatanga nyaya yematenda eGwanda National Solar Project kuti vazotsanangura kuti zvakafamba sei.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira, VaOwen Dhliwayo vaudza Studio7 kuti zviri kuitwa nevakuru vakuru vehurumende zvekuramba kuenda kuparamende zvinoratidza kuti vachiri kurarama muhurumende yaVaMugabe.
VaDhliwayo vati mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanofanira kuona kuti makurukota avo nevashandi vehurumende vachinja maitiro uye vanofanira kuremekedza paramende nekuti inomirira veruzhinji.
VaChivhayo vakabhadharwa mamiriyoni mashanu emadhora kuti vavake gwenya remagetsi rekuGwanda asi hapana basa ravakaita izvo zvaita kuti paramende iongorore kuti zvakafambasei kuti vawane basa iri pamwe nekutadza kuriita ivo vakapihwa mari.
Masvondo mashoma apfuura gurukota rezvemukati menyika, VaObert Mpofu, vakatsidza kuti havasi kuzomira pamberi pekomiti iyi kuti vape humbowo pamusoro pemangoda ekwaMarange.
Komiti iyi iri kuda kuti VaMpofu vape humbowo hwekuti zvinhu zvakafamba sei sezvo vaive gurukota rezvemigodhi panguva inonzi nevaimbove mutungamiriri wenyika, VaRobert Mugabe, pakatsakatika mangoda anokosha mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora.